Antso ho amin’ny fifanomezan-tanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
avy amin’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara
Faly miarahaba anareo amin’ny alalan’ity taratasy ity indray izahay Eveka Ray aman-dreninareo.
Eo amin’ny vanim-potoana fiandohan’ny Karemy indrindra isika izao izay ampahatsiahivan’ny Fiangonana amintsika ny Antson’i Jesoa ho amin’ny fibebahana sy fiovan’ny fo ao anatin’ny fivavahana sy eo ambany fanilovan’ny Tenin’Andriamanitra. Ary ny antso mba hisokatra bebe kokoa amin’ny hafa sy haneho asa fitiava-namana, indrindra ireo havantsika ory sy mijaly ary ao anatin’ny fahasahiranana.
Iarahatsika nahalala sy nandre ny zava-niseho mampalahelo teto amin’ny firenentsika tato ho ato dia ny voina nahazo ireo havantsika any amin’ny commune Antsakabary, faritra Sofia, ao anatin’ny diosezin’Ambanja. An’arivony mahery ireo havantsika niharan’ny herisetra ka tra-boina tsy fidiny, tsy manan-kohanina, tsy manan-kotafiana, tsy manan-kialofana ary voatohintohina hatramin’ny asa fivelomana sy ny fianarana.
Manoloana ny zava-mitranga dia :
maneho fiaraha-miory amin’ireo namoy havana sy ireo tra-boina rehetra izahay Birao sy ny Fivondronamben’ny Evekan’i Madagasika ary ny Fiangonana Katolika manontolo.
Manameloka ny vonoan’ olona sy ny herisetra ary ny valifaty na inona na inona antony.
Ary manao antso avo ho amin’ny fampihavanana sy ny fifamelan-keloka ary ny fandraisana andraikitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny firongatry ny hatezeram-bahoaka mahazo vahana etsy sy aroa. Efa naverimberinay tamin’ny hafatra nataonay io antso ho amin’ny fandraisana andraikitra io.
Maneho fisaorana manokana sy mankahery an’ireo pretra sy relijiozy ary lahika any amin’ny faritra nisehoan’ny voina, eo ambany fitarihan’i Mgr Rosario VELLA, Evekan’ny diosezin’Ambanja, tamin’ny fijoroana ho vavolombelon’ny marina sy ny fanentanana amin’ny fifanampiana ary ny fandraisana andraikitra avy hatrany hatramin’ny nitrangan’ny loza.
Maneho fisaorana an’ireo rehetra tsara sitra-po izay efa naneho fiaraha-mientana sahady satria tokoa ny voinkava-mahatratra.
Manoloana ny zavamisy ankehitriny dia tsy hainay ny hangina tsy hampahatsiahy sy hampita hafatra :
Miteny amintsika tokoa ny hafatry ny Papa tamin’ny fiandohan’ity taona ity, nankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny fandriam-pahalemana ka nitaomany antsika mba tsy hanao herisetra. (Non-violence)
Ary mbola tsy lefy ao am-po koa ny hafatry ny Kardinaly Pietro PAROLIN nanao hoe : aoka ho mpanorina fandriam-pahalemana ianareo. (Soyez des artisans de la paix). Nampahatsiahiviny tamin’izany ny tokony hanaovantsika ny hasambarana valo ho karam-panondrontsika ka averinay eto ireo tenin’i Jesoa izay tokony hanohina antsika mafy amin’izao zava-mitranga izao :
- Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa ho voky izy
- Sambatra ny mamindra fo fa hamindrana fo izy
- Sambatra ny tia fihavanana fa antsoina hoe Zanak’Andriamanitra izy
- Sambatra izay enjehina noho ny rariny fa azy ireo ny fanjakan’ny lanitra (Mt 5, 6-8)
Miharihary fa ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena ary ny fahalòvana (corruption) mihanaka manenika ny seha-piainan’ny fiaraha-monina no mahatonga izao korontana rehetra izao koa anentanana ny tsirairay mba hihaino ny feon’ny fieritreretany ka hibebaka sy hiova fo amin’izao fotoanan’ny karemy izao. Ny famonoana eritreritra no aretina ratsy indrindra mitarika any amin’ny fahafatesana mandrakizay.
Hombanay manana ny antso amin’ny fifanampiana nataon’ny Evekan’Ambanja koa miangavy ny vahoaka Malagasy rehetra mba :
- Hitondra am-bavaka ny firenena indrindra ireo mpiray tanindrazana amintsika tra-boina any amin’ny commune Antsakabary, amin’ny fotoana rehetra ahafahana manao izany na amin’ny isam-pianakaviana sy ny ankohanam-piainana, na any amin’ny fotoana iarahana any am-piangonana, indrindra amin’ny Làlan’ny Hazofijaliana amin’izao fotoanan’ny Karemy izao.
- Hanao tolo-tànana hanangonana izay fointsika rehetra: vola, akanjo, lamba, sakafo, kahié, stylo…amin’ny sehatra rehetra ahafahana manao izany, na Fiangonana, na fikambanana masina, na sekoly, …sns, ka hanangona ny azo ao amin’ny pretra, na amin’ny Caritas diosezana, na araka izay fandaminana isaky ny diosezy.
- Ary ny isaky ny Diosezy kosa no hiangaviana handefa mivantana any amin’ny mpiandraikitra ny diosezin’Ambanja na aty amin’ny Foiben’ny Caritas Nasionaly Antananarivo(jereo ny adiresy any amin’ny farany) ary izy ireo no hiangaviana handefa izay voaangona any amin’ny diosezin’Ambanja, amin’ireto toerana telo ireto:
· Ambanja – Katedraly (Caritas)
Araka izay mahamety sy mahamora azy.
Eto am-pamaranana, i Masina Maria Mpanjakavavin’I Madagasikara, Vonjin’ny Kristianina anie hanampy antsika hiatrika ny zava-tsarotra ankehitriny ary hivavaka ho antsika mba hibebahantsika marina tokoa ka hanokafatsika ny fontsika hivavaka ho an’ireo rehetra mijaly sy hitondrantsika fanampiana ho azy ireo hanehoana fa ny voin-kava-mahatratra. Misaotra mialoha amin’izay rehetra hataontsika ary Izy Tompo anie hamaly zato heny izay foinareo.
Mitso-drano anareo zahay Eveka Ray aman-dreninareo.
Amin’ny anaran’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara